Ziziphi iiRedimentary Rocks?
Imiqobo eyenziwe yiStatification
Iidombo ze-Sedimentary yinqanaba elincinane lelitye elikhulu. Nangona amatye angabonakaliyo azalwa ngokutshisa, amatye angama-sedimentary azalwa epholile emhlabeni, ngokubanzi phantsi kwamanzi. Ngokuqhelekileyo ziqulethwe ziziqendu okanye umgca ; yoko ke kuthiwa zibizwa ngamatye aqingqiweyo. Kuxhomekeka kwinto eyenziwe ngayo, iidombo zamatye ziwela kwenye yeentlobo ezintathu.
Indlela yokuxelela iiRedimentary Rocks
Into ephambili malunga namadaka enqabileyo kukuba beyakuba yintlanzi - udaka kunye nesihlabathi kunye nomdongwe kunye nodongwe - kwaye abazange batshintshwe kakhulu njengoko bajika kwidwala.
Ezi zilandelayo zihambelana nazo zonke.
Ngokuqhelekileyo zilungiselelwe kwiziqulatho zezinto ezinesihlabathi okanye ezinqabileyo (i-strata) njengalezo ozibonayo kwimichibi okanye emgodini ombiniwe kwiindunduma zesihlabathi .
Ngokuqhelekileyo umbala weentlanzi, oko kukuthi, umbala obomvu ukukhanya okuluhlaza.
Baya kugcina iimpawu zobomi kunye nomsebenzi wendawo, njengama-fossils, amathrekhi, amanqaku e-ripple njalonjalo.
Rotic Sedimentary Rocks
Iseti eqhelekileyo yamatye e-sedimentary aqukethe izixhobo ezinqabileyo ezenzeka kwiindawo ezidityanisiweyo. Ukuqhekeza kuninzi kunamaminerali omhlaba - i-quartz kunye nobumba - ezenziwe ngophuculo lomzimba kunye nokuguqulwa kwamachiza . Ezi zikhutshwa ngamanzi okanye umoya kwaye zibekwa kwindawo eyahlukileyo. I-Sediment ingabandakanya iinqununu zamatye kunye neeblokhwe kunye nezinye izinto, kungekhona nje iigrafu zamaminerali ahlanzekileyo. Iidoloji zisebenzisa i- clasts yegama ukubonisa iincinci zazo zonke iindidi, kwaye amatye ayenziwe ngama-clasts abizwa ngokuba ngama-classic rock.
Khangela ngeenxa zonke apho i-sediment yehlabathi ihamba khona: isanti kunye nodaka ziqhutyelwa imilambo ukuya elwandle, ngokubanzi. Isanti senziwe nge- quartz , kwaye udaka lenziwe ngamaminerali ebumba. Njengoko ezi ndawo zihlala zingcwatyelwe ngexesha le- geologic , zixutywe kunye phantsi koxinzelelo kunye nokushisa okuphantsi, kungekho ngaphezu kwe-100 C.
Kule miqathango i-sediment ifakwe kwisigxina : isanti iyaba yintlabathi kunye nodongwe. Ukuba iirekhodi okanye iiflethi ziyingxenye yeqhekeza, idwala elenza i-conglomerate. Ukuba iliwa liphukile kwaye liphinde lenziwe ndawonye, ​​libizwa ngokuba yi-breccia.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ezinye iindidi ezivame ukugqithwa kwinqanaba elimnyama liyi-sedimentary. I-Tuff idityaniswe umlotha owileyo emoyeni kwimipuphu yase-volcanic, okwenza nje njengelinye ilitye njengelitye elwandle. Kukho ukunyakaza kwimiba ukuqonda le nyaniso.
Olunye uhlobo lwentlambo luvela elwandle njengemvelo encane - iplankton - ukwakha iigobolon ngaphandle kwe-calcium carbonate okanye i-silika. Iplankton efile ihlambela iigobolondo zazo ezinobuncwane kwi-seafloor, apho ziqokelela khona. Le nto iphendukela kwiindidi ezimbini zamadwala, i-limestone (carbonate) kunye ne-chert (islica). Ezi zibizwa ngokuba yi-organic sedimentary rocks, nangona zingenziwanga ngezinto ezibonakalayo njengokuba umakhemikhali uya kuchaza .
Olunye uhlobo lweentlobo ze-sediment apho izixhobo ezifayo zityalo zikhula zibe ziqendu. Ngomlinganiselo omncinci wokudibanisa, oku kuba yi-peat; emva kokungcwaba ixesha elide nangaphezulu, kuba ngamalahle .
Amalahle kunye nepeat zizinto eziphilayo kwizinto zomhlaba kunye nomqondo weekhemikhali.
Nangona i-peat yakha kwiindawo zehlabathi namhlanje, iibhedi ezinkulu zamalahle esizibambileyo ngexesha elidlulayo kwiimvula ezininzi. Akukho zikhephe zamakha zamazulu namhlanje ngenxa yokuba iimeko azibabongi. Ulwandle kufuneka lube lukhulu kakhulu. Ininzi yexesha, ukuthetha nge-geologically, ulwandle lukhulu ngamamitha aphezulu kunamhlanje, kwaye ezininzi zeeplanethi zizilwandle ezinzulu. Yingakho sinesihlabathi santyantyambo, i-calestone, i-shale kunye namalahle ngaphezu kweyona ndawo ephakathi kwe-United States nakwezinye iindawokazikazi kwilizwekazi. (Iidonga ze-Sedimentary nazo zibonakaliswe xa umhlaba uphuma. Oku kuqhelekileyo kumaphethelo eeplates zomhlaba .
Ngamanye amaxesha amandulo amanxweme angatyekiyo avumela ukuba iindawo ezinkulu zibe zimele kwaye ziqalise ukomisa.
Kwimeko leyo, njengoko amanzi olwandle ekhula ngakumbi, iiminerali ziqala ukuphuma kwisisombululo (ukukhawuleza), ngokuqala nge-calcite, ke i-gypsum, ibe i-halite. Amadangatye aphethweyo athile amancinci, i-rocky gypsum, kunye netyuwa yelitye ngokulandelanayo. Ezi ngxondorha, ezibizwa ngokulandelelana kwe- evaporite , nazo ziyinxalenye yendlu ye-sedimentary.
Kwezinye iimeko, i- chert nayo inokuyilwa ngamanzi. Oku kufuthi kwenzeke ngezantsi kwe-sediment surface, apho amanzi ahlukeneyo ajikeleza kwaye asebenzisane ngamakhemikhali.
Diagenesis: Utshintsho oluphantsi komhlaba
Zonke iindidi zamatye e-sedimentary zixhomekeke kwiinguqu ezongezelelweyo ngexesha lokuhlala phantsi komhlaba. Iifluids zingangena ngaphakathi kwaye ziguqule i-chemistry yazo; Ukushisa okuphantsi kunye noxinzelelo oluthathakayo kunokutshintsha ezinye zeeminerali zibe ngamanye amaminerali. Ezi nkqubo, ezithe zinyameko kwaye aziyi kuguqulwa kwamadwala, zibizwa ngokuba yi- diagenesis ngokuchasene nokuhambelana nomzimba (nangona kungekho mda ocacileyo okhoyo phakathi kwababini).
Iintlobo ezibalulekileyo ze-diagenesis zibandakanya ukubunjwa kwe-dolomite mineralized kwiimitha zamatye, ukubunjwa kwe-petroleum kunye namazinga aphezulu wamalahle, kunye nokubunjwa kweendidi ezininzi zeempahla ze-ore. Amaminerali e-zeolite abaluleke kakhulu kwezoqoqosho ayenziwa kunye neenkqubo ze-diagenetic.
IiRedimentary Rocks IiNdaba
Uyabona ukuba uluhlu ngalunye lwedwala lwentlabathi lunebali emva kwayo. Ubuhle bamadwala enqabileyo kukuba i-strata yabo igcwele izikhokelo kwihlabathi elidlulileyo. Ezi zikhombo zi nokuba zizinto ezikhoyo okanye izakhiwo ezinjengeempawu ezifana namanqaku ashiywe ngamanzi amanzi, iintambo zomdaka okanye izinto ezintle ezibonakalayo phantsi kwe-microscope okanye kwibra.
Kule miqolo siyazi ukuba amaninzi amanqabileyo aphuma emanzini , ngokuqhelekileyo akhiwa elwandle elingaqhelekanga. Kodwa ezinye izitye zendawo ezakhiweyo kumhlaba: amadwala e-classic ezenziwe kwiindawo ezinzulu zamachibi amanzi ahlambulukileyo okanye njengengxube yentlabathi entle, amadaka e-peat bogs okanye iibhedi zamanzi, kunye ne-evaporites kwimidlalo. Ezi zibizwa ngokuba yi-continental okanye i- terrigenous ( sedingary rock rocks).
Iidombo ze-Sedimentary zizityebi kwimbali ye-geologic yohlobo olukhethekileyo. Nangona amatye angabikhoyo kunye neetamorphics abuye anamabali, aquka uMhlaba ophantsi kwaye afune umsebenzi onzulu ukuchaza. Kodwa kwiidombo ezinqabileyo, uyaziqonda, ngendlela echanekileyo, ukuba ihlabathi linjani kwixesha elidlulileyo .
Liliphi iLwala? Ezi zinto ezine ziya kukuxelela
Ukukhangela kwiNinzi yeMahluko yoLwandle lwe-Obsidian
Yiyiphi i-Limestone kunye neMarble?
Yintoni ephefumlelweyo okanye eyathonya uVladimir Nabokov ukuba abhale 'uLolita'?
25 'I-Family Guy' Iindwendwe zeNkwenkwezi Ngubani oza kukumangalela
I-Top 10 yeHilary Duff Iingoma
I-Ramble Around Teotihuacán
47 Iingqungquthela zeConfucius ezisekhoyo Inyaniso namhlanje
Umsebenzi weMculo we-Neo Soul Pioneer Maxwell
I-Hil St. Soul Biography
Yintoni iTonnage Tonnage?
Ndingayifumana Njani Izikolo Ezizimeleyo Ekufuphi?
Boxelder, Umthi oqhelekileyo eMntla Melika
U-Ian Brady no-Myra Hindley kunye nabaMbulali bamarha